शास्त्रअनुसार यी ६ गुण भएका युवती भाग्यमानी हुन्छन् - Sidha News
शास्त्रअनुसार यी ६ गुण भएका युवती भाग्यमानी हुन्छन्
एजेन्सी। हाम्रो समाजमा शास्त्रीय मान्यतालाई अहिलेसम्म सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ । जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविश्यबारे पनि बताइन्छ । शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण हुने ब्यक्ति सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र शुभ फल प्राप्त गर्छन् ।
उक्त पुराणमा भाग्यमानी कन्यामा हुने १२ गुणबारे उल्लेख गएिको छ । त्यस्ता युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष पनि धेरै भाग्य मानी हुने पुराणमा उल्लेख छ । समुन्द्र शास्त्र अनुसार जुन युवतीको अनुहार पितासँग मिल्छ त्यस्ता युवती भाग्यमानी हुन्छन् । उनीहरुले जीवनमा सुखभोग गर्ने र चाहेको कुरा प्राप्त गर्ने उक्त शास्त्रको दावी छ । त्यस्तै आमासँग अनुहार मिल्ने युवक पनि भाग्यमानी मानिन्छन् । कालो कपाल भएका र आगाडितिर झुकेको कपाल हुने युवती भाग्यमानी हुने समुद्र शास्त्रमा उल्लेख छ । चिल्लो, कोमल र मुलायम कपाल भएका कन्यालाई उत्तम मानिएको छ ।
गोलो र चिल्लो तथा आकर्षक अनुहार भएका युवती पनि भाग्यमानी हुन्छन् । जुन युवतीको शिरको अगाडीको भाग उठेको छ त्यस्ता युवती धनी र वैभवशाली हुने मानिन्छ । सिन्दुर लगाउने स्थान सिधा र उठेको छ भने त्यस्ता युवती पनि भाग्यवती मानिन्छन् । आँखीभौं जोडिएका युवतीलाई विश्वास गर्न नसकिने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ । आँखीभौं धनुष जस्तै झुकेको भए यस्ता युवतीलाई भाग्यमानी मानिन्छ ।
प्राचीन ग्रन्थमा सेतो रंगलाई शुभ मानिएको छ तर समय परिवर्तन हुँदै जाँदा मानिसहरूले यो रंगलाई मांगलिक कार्यमा प्रयोग गर्न छोडे । प्राचीनकालमा सबै प्रकारका मांगलिक कार्यमा सेतो रंग नै प्रयोग गरिन्थ्यो । पुरोहितहरू पनि सेता लुगा लगाउँथे । तर पछि अन्य रंगहरू मांगलिक कार्यमा प्रयोग हुन थाले र बिस्तारै सेतोलाई प्रतिस्थापन गर्न थाले । मृत्यु चाहिँ अमंगलको सूचक हो त्यसैले मृत्युसंस्कारमा सेतोको प्रयोग रहिरह्यो । अनि महिलाप्रतिको विभेदकारी नीतिनियमका कारण महिलाले चाहिँ विधवा भएमा जीवनपर्यन्त सेतो वस्त्र लगाउनुपर्ने, पुरुषले चाहिँ विधुर भएमा जस्तो लुगा लगाएपनि हुने चलन चलाइयो ।
तर वेदमा विधवा स्त्रीलाई पुनर्विवाहको छुट छ । उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि।हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सम्बभूथ। अर्थात्, पतिको मृत्यु भएपछि कुनै पनि स्त्रीले उसके यादमा जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने छैन । अर्को पुरुषलाई विवाह गरेर जीवन अघि बढाउने पूरै छुट उक्त स्त्रीलाई छ । आजकल त मानिसहरूको सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ । विधवालाई पनि समाजमा यथोचित सम्मान दिन थालिएको छ । विधवाहरू पनि रंगीन वस्त्र लगाउने अनि पुनर्विवाह गर्ने गरिरहेका छन् ।
तैपनि सेतो वस्त्र लगाउनुका पछाडि केही कारणहरू छन् । खासमा सेतो रंग भनेको अन्य रंगहरूको अनुपस्थिति हो । आफ्नो आमाबुवाको घर छोडेर पतिको घर जाने महिलाका लागि पति महत्वपूर्ण व्यक्ति हो । त्यही पतिको मृत्युका कारण जीवन रंगहीन भएको महसूस गर्ने महिलाले सेतो लुगा लगाउनु उपयुक्त नै हो । सेतो सारी लगाउने महिलाको फरक पहिचान बन्छ । सबैजना ऊप्रति संवेदना राख्न थाल्छन् । यो मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण उनले सामाजिक सुरक्षा पनि पाउँछिन् । तर सेतो वस्त्र लगाएकी नारीप्रति कुदृष्टि राख्ने नराधमहरू पनि हुन्छन् समाजमा । सेतो कपडाले मन शान्त र सात्विक बनाउँछ जबकि रंगीचंगी कपडाले भौतिकतामोह देखाउँछ ।
रविलाईलाई बन्धक बनाउने गरी रिहाई गरिएको
समयमै बाटो बनेन भने साँच्चै अनशन
ढल्केबर सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा, कुलमानले
८२ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध वि’च्छेद
सरकारी कर्मचारीले बहुविवाह गरे जागीर चट्,
भावी चीफलाई ब’द्नाम विभागको जिम्मेवारी !
विश्व बैंकले भन्यो : विद्युतको क्षेत्रमा
सवारी भाडा घट्यो
प्याजको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च
यस प्रकार रहेको छ आजको बिदेशी
यस्तो छ विश्वकै धनी बिल गेट्सकी छोरीको लाइफस्टाइल
वैवाहिक जीवनमा आउने अशान्ति कसरी हटाउने ?
एक डान्सर युवती कसरी हुन पुगिन अरबपति ?
०७६ असोज ३० गते बिहिबार ई. स. २०१९ अक्टोबर १७ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको आज जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
साहसिक पेमा, ६ बर्ष देखि आकाशमा जहाज उडाउँदै